ထူးတဲ့ ဘယ်သန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ထူးတဲ့ ဘယ်သန်
Posted by Zaw Wonna on Aug 28, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 11 comments
left handed ဘယ်သန်
တနေ့က အလုပ်ထဲမှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ မလေးလူမျိုး တစ်ယောက်က ကွန်ပြူတာမောက်စ်ကို ညာဘက်လက်က ကိုင်ပြီး ဘယ်ဘက်လက်က စာရေးနေတာကို တွေ့ရတော့ တပြိုင်တည်း အလုပ်နှစ်ခု လုပ်နိုင်တာကို ချီးကျူးမိပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူက အဆင်ပြေတာက နည်းနည်းပါကွာ၊ အဆင်မပြေတာတွေက များပါတယ် ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ “ဘယ်သန်တို့ရဲ့ ဒုက္ခ” ဆိုတာကို ရှင်းပြပါတယ်။ သူ့စကားထဲမှာ “မင်းတို့ ကမ္ဘာကြီးက ငါတို့ ဘယ်သန်တွေအတွက် မဟုတ်ဘူးကွ” ဆိုတာလည်း ပါတယ်။ ဘယ်သန်တွေ အသုံးပြုရ ခက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာ အထင်ရှားဆုံးအဖြစ် ကတ်ကြေးကို သူက နမူနာ ပေးပါတယ်။ ဟုတ်သားပဲ။ သူပြောမှပဲ ပစ္စည်း အတော်များများဟာ ညာသန်တွေ အတွက်သာ သီးသန့် ထုတ်လုပ်ထားသလို ဖြစ်နေတာကို သတိထားမိပါတယ်။
ကျနော်လည်း သူ့ကို အားပေးချင်တာနဲ့ ဘယ်သန်တွေရဲ့ အားသာချက်တွေကို လေ့လာရင်း စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်တွေကို တွေ့ရပါတယ်။ အချက်အလက် အချို့ကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ။
အမေရိကန် သိပ္ပံဌာန၏ အဆိုအရ လူသားများ၏ ၁၅% သည် ဘယ်သန်သူများ ဖြစ်ကြပြီး အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ဘယ်သန်သူ ဦးရေ နှစ်ဆ ပိုများသည်။
ဘယ်သန်သူများသည် ဥာဏ်ကြီးရှင်များ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများသည်။
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးနှင့် သက်တမ်းအရှည်ဆုံး ဖြစ်သည့် အိုင်ကျူမြင့်သူများ အဖွဲ့ (MENSA) မှ အဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း၏ ၂၀% သည် ဘယ်သန်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့် ကောလိပ်ပညာ သင်ကြားဖူးသော ဘယ်သန်သူများသည် ညာသန်သူများထက် ၁၅% ပိုမို ကြွယ်ဝကြပြီး ဘွဲ့ရပြီးသူ ဘယ်သန်သူများမှာ ညာသန်သူများထက် ၂၆% ပိုမို ကြွယ်ဝ ကြသည်။
ဘယ်သန်သူများသည် ညာသန်သူများထက် အရက်သမား ဖြစ်နိုင်ခြေ သုံးဆ ပိုများသည်။
အကယ်၍ မိဘနှစ်ပါးစလုံးသည် ဘယ်သန်သူများဖြစ်ပါက သားသမီးများမှာ ဘယ်သန်သူ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၅၀% ရှိပြီး ညာသန်သူ မိဘများတွင်မူ ဘယ်သန်သူ သားသမီး ရနိုင်ခြေ ၂% သာ ရှိသည်။
အချက်အလက်များ အရ အသက်အရွယ် ကြီးသော အမျိုးသမီးများသည် ဘယ်သန်သူ သားသမီးကို မွေးဖွားနိုင်ခြေ ပိုများသည်။
ဘယ်သန်သူများသည် အပျိုဖော်ဝင်ရာတွင် ညာသန်သူများထက် ၄ လမှ ၅ လခန့် အထိ နောက်ကျလေ့ရှိသည်။
ဘယ်သန်သူများ၏ ၅၀%သည် ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုရာတွင် မောက်စ်ကို ဘယ်လက်ဖြင့် ကိုင်တွယ်လေ့ ရှိကြ ပြီး ဘယ်သန်သူများ၏ ၆၈% သည် ကတ်ကြေးကို ညာလက်ဖြင့် အသုံးပြုလေ့ ရှိကြသည်။
Mac ကွန်ပြူတာ၏ ပထမဆုံး ဒီဇိုင်းနာ ၅ ဦးတွင် ၄ ဦးတို့သည် ဘယ်သန်သူများ ဖြစ်ကြပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ နောက်ဆုံး သမ္မတ ၅ ဦးတွင် ၃ ဦး (Obama, Clinton, Bush Sr.) တို့မှာ ဘယ်သန်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
လေ့လာမှု တစ်ခု အရ ဘယ်သန်သူများသည် ညာသန်သူများထက် ၉ နှစ် ပိုမို၍ သက်တမ်းတိုကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းက သက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်နယ်ပယ် အသီးသီးမှာ ထင်ရှားတဲ့ ဘယ်သန်သူ ပညာရှင်များကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
(စာကြွင်း။ ။ကျနော့်ရဲ့ ဘယ်သန် သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့ နေရာမှာ အများနဲ့ မတူတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ စဉ်းစား လုပ်ကိုင်တတ်တာကို သတိထားမိကြောင်းပါ။)
Ref: Daily Infographic (Left handed facts and statistics)
ဘယ်သန်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခုလို တိတိကျကျသိရတော့ zawana ရေကျေးဇူးနော်။ဒါနဲ့ အိုင်စတိုင်းရော ဘယ်သန်မဟုတ်ဘူးလား
အမေရိကန် သမ္မတတွေထဲမှာ James A. Garfield (1831-1881) 20th, Herbert Hoover (1874-1964) 31st, Harry S. Truman (1884-1972) 33rd, Gerald Ford (1913- ) 38th, Ronald Reagan (1911 – ) 40th, George H.W. Bush (1924- ) 41st, Bill Clinton (1946- ) 42nd, Barack Obama (1961- ) 44th
ထင်ရှားသူတွေထဲမှာ အိုင်စတိုင်း၊ လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီ၊ မင်းသမီး အင်ဂျလီနာ ဂျိုလီ၊ မင်းသား ဘရုဝီလစ်၊ ဂျပ်စတင် ဘီဘား၊ လေဒီဂါဂါ၊ အော်ပရာ ဝင်းဖရေး …… ဟာ ဘယ်သန်တွေ တော်တော် များတာပဲ။
သူတို့ကမ္ဘာလားတောင် အောက်မေ့မိပါရဲ့ …….
မှော်ဆရာရဲ့ မင်းသမီးလေးကလဲ ဘယ်သန်ပဲ…
ဘယ်သန်တွေက ရေကူးတော့ ကျွမ်းဟန်မတူဘူးဗျ…
ဘယ်သန်တွေ ရေကူးကျွမ်းတယ်ဆိုရင် နာဂစ်ဖြစ်တော့ သူလွတ်နှိုင်လောက်တယ်..
အခုတော့ ကောင်းကင်ဘုံမှာ ကျွန်တော့ကို စောင့်နေလောက်ပြီ…..
ငယ်ငယ်ကတော့ ဘယ်သန်တွေကို ဘယ်ချကိုင် တို့ ဘယ်ကျော်တို့ဆိုပြီးနောက်ခဲ့ဖူးတယ်ဗျ ။ ခုတင်ထားတဲ့ ပိုစ့်လေးကိုတွေ့လိုက်တော့ ဘယ်သန်တွေအကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရတယ် ။ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တွေထဲမှာလဲ ဘယ်သန်တွေရှိတာပဲနော် ။ ဗဟုသုတ ပေးစွမ်းတဲ့အတွက် zawana ကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ နောက်လဲဗဟုသုတ ရမယ့်အကြောင်းလေးတွေ ဖတ်ချင်ပါသေးတယ် ။
. ကပ်ကြေး၊ကိုညာနဲ့ညှပ်တယ်..။ ကွန်ပြူတာ..မောက်စ်ကို..ညာနဲ့ကိုင်တယ်..။
ယူအက်စ်မှာက.. ဘယ်သမားတွေက.. ဂုဏ်ယူပြီး လုပ်နေသလိုခံစားမိတယ်..။
သွားဆရာဝန်တွေဆိုရင် ဘယ်သန်အတွက် သီးသန့်ခုံ (သွားကုသသောခုံ) ရှိတယ်။ အဲလိုမှ မဟုတ်ရင် လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဆိုပဲ။
ညာသန်ပေမယ့် တချို့အလုပ်တွေကို ဘယ်နဲ့လည်း လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားတယ်။ (eg: သွားတိုက်တာ)။ ညာလက်မောင်းအောင့်တော့ ဘယ်ဘက်နဲ့လည်း လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားထားတာ။
အချို့နှစ်ဖက်လုံးသန်တဲ့လူတွေ တွေ့ဖူးတယ်။ နှစ်ဖက်လုံးသန်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။ ဘယ် က စမ်းစမ်း၊ ညာ က စမ်းစမ်း ပေ့ါ။
ငါ့ကိုအဲ့ သလောက်မြှောက်မရေးပါနဲ့ ဟာ…
အေ့……..ဘယ်ကောင်လဲကွ ဘယ်သန်က အရက် သမားဖြစ်နိုင်ခြေ သုံးဆပိုများတယ် ပြောတာ။ အေ့…..
အဖေက ဂစ်တာကို သီသန့် လုပ်ပေးတော့ ငယ်ငယ်က ကျုပ်မှာ ဘယ်သန်တီးတဲ့ ဂစ်တာရှိတယ်။ အဆောင်ရှေ့ သွားပြီး ဖွန်ကြောင်
တော့ သူငယ်ချင်းတွေ ဂစ်တာကို ယူတီးလို့ မရတော့ ဖွန်ကြောင်ချင်စိတ်ကလေးကို အားတင်းရင် ညာနဲ့ဂစ်တာတီးနိုင်ခဲ့တယ်။
ညာနဲ့စာတော့လုံးဝမရေးနိုင်ဘူး။ ပန်းချီဆွဲတာ နှစ်ချိုက်တော့ လေ့လာရင်း Tattoo ထိုးတတ်သွားတယ်။ စက်ဝယ်ပြီး ကိုယ့်အရေပြား
က စမ်းသပ်ကွင်း ဖြစ်လာတယ်။ ကျောပြင်နဲ့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တဲ့ နေရာတွေကလွဲလို့တစ်ကိုယ်လုံးနီးပါးကို မှန်ကြည့်ပြီး
ဘယ်လက်နဲ့ ထိုးခဲ့တယ်။ ညာဖက်နဲ့ဘယ်ဖက် လက်ဖျံမှာ စမ်းထိုးတယ်။ မိုးလင်းတဲ့ထိ 4cm ပတ်လည်လောက်ပဲ ရှိတဲ့ ပုံပဲထိုးနိုင်
လို့ လက်လျှော့ခဲ့တယ်။ Pattarn တွေကို ညှပ်ရင် ကတ်ကြေးကို ဘယ်လက်နဲ့ ပဲ ကိုင်တယ်။ Mouse ကို ညာနဲ့ ကိုင်တယ်။
Masturbation လုပ်ရင် ဘယ်ညာ ၂ ဖက်လုံးနဲ့ လုပ်တယ်။ ထမင်းစားရင် ဘယ်နဲ့ စားတယ်။ အပြင် အိပ်သာသွားလို့ဖင်ဆေးပိုက်
မရှိရင် ညာနဲ့ကုန်းတယ်
ကြိုက်သွားပြီဗျာ။ အခု သိရသလောက်တော့ ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာ သူကြီးရယ်၊ အခြားရွာသား နှစ်ဦးရယ်က ဘယ်သန်တွေ ဖြစ်ကြောင်းပါ။ အခြား ကံထူးရှင်များ ရှိရင်လည်း လက်ညိုးထောင်ကြပါဦး။
ပြီးတော့ အတွေ့ အကြုံလေးတွေလည်း ဖလှယ်ရတာပေါ့ဗျာ။
သြဂုတ်လ၁၃ ရက်နေ့ ကတော့ကိုယ့်ဘာသာဂုဏ်ပြုလိုက်တာဘဲ